I-BIME: Isoftware njengoLwazi lweShishini lweNkonzo | Martech Zone
I-BIME: Isoftware njengoNgcono weShishini leNkonzo
Lwesine, ngoFebruwari 7, 2013 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 6, 2013 Douglas Karr
Njengoko inani lemithombo yedatha liqhubeka nokukhula, business intelligence (BI) ziyenyuka (kwakhona). Iinkqubo zobukrelekrele kweshishini zikuvumela ukuba uphuhlise ukunika ingxelo kunye nedashboard kwidatha kuyo yonke imithombo onxibelelana nayo. IBHAYIBHILE yiSoftware njengenkonzo (i-SaaS) yeNkqubo yezoBukrelekrele yeShishini ekuvumela ukuba uqhagamshele kokubini kwi-intanethi nakwihlabathi elikwindawo enye kwindawo enye. Yenza unxibelelwano kuyo yonke imithombo yakho yedatha, yenza kwaye uphumeze imibuzo kwaye ujonge iideshibhodi zakho ngokulula - konke ngaphakathi konxibelelwano oluhle lweBIME.
I-BIME inokusebenza "njengomfundi ophilayo", esebenza kude kwaye ngexesha lokwenyani. Nangona kunjalo, ayifuni ukuba ubambe idatha yakho efini. Nangona kunjalo, olu khetho lunezinto ezininzi: fikelela kwidatha yakho nanini na kwaye naphi na. Kuxhomekeke kubungakanani bedatha, ungalayisha idatha yakho ngaphandle komthungo kwiDejà Vu, iBimeDB okanye Google BigQuery.
Nge-BIME unokucaca kwaye ungaguquguquki imodeli yombuzo kuyo yonke idatha yakho. Beka "izinto" ofuna ukuzihlalutya kwimiqolo nakwiikholamu kwaye ugqibile. Emva koko ucofe okanye usike. Izinto zeqela ngamandla, zisefe ngokusekwe kwimithetho entsonkothileyo okanye ulinganise ifuthe lotshintsho kwamanye amanani akho.
Nge-BIME unokwenza ukubonwa okusebenzayo Oko kuyakubonisa imeko kunye neepateni ezifihliweyo kwidatha yakho. Ungazibumba ngokucoca uthotho okanye utyhile idatha esisiseko. Yonke into yenzelwe ukubonisa elona xabiso lolwazi kwindawo encinci yesithuba. Ungathatha ithuba lombala kunye nobungakanani bokwenza iikhowudi umzekelo, okanye udlale kuluhlu olubanzi lwezinto onokuzenza kwitshathi.
Thelekisa eyakho Kwiwebhu kubahlalutyi idata ngeofisi yakho yangasemva, linganisa eyona ROI yakho yephulo ngokuchasene nebhajethi yakho yespredishithi. Konke kwideshibhodi enye. Usebenzisa amanqaku abaliweyo e-BIME kunye nemilinganiselo, izinto eziguquguqukayo zehlabathi, amaqela, iiseti kunye namanye amalungu abaliweyo unokujonga idatha yakho nakweliphi na icala.
Vula amandla oovimba beenkcukacha zefederal UmbuzoBlender. Abasebenzisi banokubuza uninzi lwemithombo kwaye bayenze ingqiqo ngayo- ngaphandle kolwimi lombuzo, ifayile kunye neefomathi zemethadatha. I-QueryBlender ivumela abasebenzisi ukuba baxube kwaye batshatise phantse naluphi na ulwazi, olusuka kwilifa lespredishithi kunye noovimba beenkcukacha ezikhulu zokuphila ngokusasaza idatha kwiGoogle Analytics, kuGoogle Apps, salesforce.com, okanye kwiiNkonzo zeWebhu zeAmazon.
Izinto zeqela ngamandla, zisefe ngokusekwe kwimithetho entsonkothileyo okanye ulinganise ifuthe lotshintsho kwamanye amanani akho. IiBIME injini yokubala inayo yonke into oyifunayo, nangaphezulu. Musa ukoyika ukubhala ikhowudi; sinonxibelelwano oluhle lomsebenzisi lokuvelisa ubalo oluqhelekileyo. Ukhetho lwasemva kokulungiswa luya kukugcina iiyure kwaye likuvumele ukuba ufezekise ukubala okuqhelekileyo ngaphandle kokubhala ifomula enye.
wonke IBHAYIBHILE Ilayisensi iqala ngeedashboard ezingama-20, unxibelelwano ngedatha eli-10, uyilo olu-1 kunye nababukeli beedashboard ezingenamda.
tags: IiNkonzo ze-Amazon WebBigQueryIBimeDBbusiness intelligenceIdeja Vui-google analyticsiGoogle appsGoogle BigQuerysalesforce.com
Ingxelo yeBenmarkmark yeB2012B ka-2